Fiomanana Alahady 24/05/2015 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fiomanana Alahady 17/05/2015
Perikopa Jolay 2015
Fiomanana Alahady 24/05/2015
Fiomanana Alahady ANDRO PENTEKOSTA_24.05.2015 (pdf)
Alahady 24 mey 2015: ANDRO PENTEKOSTA
Joela.3:1-5; Asa.2:32-41; Jao.14:23-31; Jao.14:15-21
[Ny amin’ny handatsahana ny Fanahy Masina, sy ny hitsarana ny firenena rehetra]
1 Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahiantitrareo hanonofy, ary ny zatovonareo hahita fahitana;
2 Ary na dia ny mpanompolahy sy ny mpanompovavy aza dia handatsahako ny Fanahiko amin’izany andro izany.
3 Ary hanisy fahagagana eny amin’ny lanitra sy etỳ amin’ ny tany Aho, dia rà sy afo ary setroka mitankosina.
4 Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho rà, alohan’ny hahatongavan’ny andron’i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina.
5 Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran’i Jehovah dia ho afa-mandositra; Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy sisa afaka, araka izay efa voalazan’i Jehovah, ary izay antsoin’i Jehovah dia ho isan’izay afa-mandositra.
Asan’ny Apostoly 2:32-41
[Ny nilatsahan’ny Fanahy Masina tamin’ny Andro Pentekosta, sy ny toriteny nataon’i Petera tamin’izany]
32 Izany Jesosy izany dia efa natsangan’Andriamanitra, ary vavolombelon’izany izahay rehetra.
33 Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan’Andriamanitra [Na: ho eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra] Izy, ary nandray tamin’ny Ray ny Fanahy Masina Izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao Izy.
34 Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra; fa hoy izy: Jehovah nilaza tamin’ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana
35 Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao [Sal. 110. 1].
36 Koa aoka ho fantatry ny taranak’Isiraely rehetra marimarina fa iny Jesosy nohomboanareo tamin’ ny hazo fijaliana iny dia efa nataon’Andriamanitra ho Tompo sy Kristy.
37 Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin’i Petera sy ny Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay?
38 Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;
39 fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’i Jehovah Andriamanitsika hanatona Azy.
40 Ary nanambara sy nananatra azy tamin’ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe: Aoka hovonjena ho afaka amin’ity taranaka maditra ity hianareo.
41 Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa; ary tokony ho telo arivo no olona nanampy ho isany tamin’izany andro izany.
24 Izay tsy tia Ahy dia tsy mitandrina ny teniko; ary ny teny izay renareo dia tsy Ahy, fa an’ ny Ray izay naniraka Ahy.
26 fa ny Mpananatra [Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] , dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.
27 Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo.
28 Efa renareo fa Izaho nilaza taminareo hoe: Handeha Aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia Ahy hianareo, dia ho faly, satria mankany amin’ny Ray Aho; fa ny Ray dia lehibe noho Izaho.
30 Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony Aho; fa avy ny andrianan’izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy.
31 Fa mba ho fantatr’izao tontolo izao fa tiako ny Ray, ary araka izay nandidian’ny Ray Ahy, dia izany no hataoko. Mitsangàna, andeha isika hiala eto.
15 Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko.
16 Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra [Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] hafa mba ho eo aminareo mandrakizay,
17 dia ny Fanahin’ny fahamarinana, Izay tsy azon’izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo.
8 Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankatỳ aminareo Aho.
19 Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa hianareo no hahita Ahy; satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo.
20 Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo.
21 Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy.